बहुचर्चित माडिखोला पुल आज उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनद्वारा उद्घाटन – रोल्पा समाचार
२०७६ भाद्र ७, शनिबार ०१:१६ गते
रोल्पा समाचारदाता on २०७६ भाद्र ७, शनिबार ०१:१६ गते
भाद्र ७ रोल्पा
विगत करिव एक दशकदेखि चर्चाको विषय बनेको बहुचर्चित माडीखोला पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । रोल्पाका सरोकारवालाहरुहरुको ध्यान आकर्षण गरेको माडी खोला पुल रोल्पा माडिखोला पुल निर्माण भएपछि अब सोही मोटरेवल पुलबाट यातायातका सधानहरु आवत जावत गर्ने भएका छन् । पुल निर्माण भएपछि निकै लामो समयदेखि आलोचना खेपेरहेका नेता देखि रोल्पालीसम्म खुशी भएका छन् । आज अपरान्ह १२ बजे ऊर्जा जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्री वर्षमान पुनमगर, पूर्व सभामुख ओनसरी घर्तीमगर, प्रदेश नेपालका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसी, प्रदेश सांसद दीपेपन्द्र कुमार पुनमगर लगायतले उद्घाटन गर्नु हुने भएको छ ।
माडिखोला पुल शुरुवात कसरी भयो ?
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) सरकारमा सहभागि भएपछि पहिलो प्राथमिकताका साथ रोल्पाको विकास निर्माणलाई अगाडि बढाएको थियो । विगतदेखि माडीखोलामा पुल नहुँदा रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङसम्म आउनका लागि पश्चिमक्षेत्रका जिल्लाबासीलाई निकै कठिन थियो । त्यस बखतमा रोल्पाको सदरमुकादेखि पश्चिम क्षेत्रका नागरिकहरु समुद्रीक्षेत्रका नागरिक झै कष्ठकरयुक्त जीवन यापन गरिरहेका थिए । सोही क्रममा रोल्पा जिल्लाका आम सरोकारवाला नेतृत्वको परार्मशमा रोल्पा जिल्लाका नेतृत्वहरुको पहलमा माडीखोला पुलका लागि बजेट व्यावस्था गरी पुल निर्माणको लागि अगाडि बढाइएको थियो ।
किन बनेन पहिलो सम्झौतामै पुल ?
२०६६ असार १९ गते सडक डिभिजन कार्यालय चकचके प्यूठान र ठेकदार बसन्त डिसी बीचमा सम्झौता भएको थियो । संझौता गरिए अनुसार ३ करोड ६८ लाखमा निर्माण हुने पुल अझैसम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेन। पुल ढिलाई हुनमा रोल्पाली नागरिकले ठेकदार बसन्त डिसीको कमजोरी हो भन्दै आक्रोशित बन्दै माडीखोला र रोल्पामै धेरै पटक कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए । नेतृत्वहरुले पनि ध्यान दिदाँ निर्माण व्यवसायी डिसीले नै विभिन्न बहाना र कानूनी कुरा गर्दै नबनाएको भने सत्य हो । कहिले पछिल्लो समयमा सो पुल डिजाइनका लागि खटिएको कन्सलटेन्सी नै कमजोरी भएको खुलासा भएको थियो। नेपालमा करिव ३० वर्ष अगाडिदेखि कार्यरत इस्ट कन्सल टेन्सीले सर्बेको जिम्मा लिएको थियो । पहिलो पटक गरेको सर्बे अनुसार पुलको लम्बाई ६२ मिटर, मोडहरु पनि कम कटान गरिएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालयलाई बसन्त डिसीले लाइन दिनका लागि पहल अगाडि बढाई दिनु प¥यो भने पछि ढिलै भए पनि लाईन दिदाँ ७२ मिटर बढ्यो । निर्माण गर्नका लागि ढिलो गरिरहेका बसन्त डिसीलाई झन बाहना बनेको नागरिकहरुकोले तत्कालीन रुपमा बनाई थियो । ७२ मिटर लम्बाई बढेपछि १५ प्रतिशत रकम बढाएर हाल फेरि लाईन दिने भन्दा गाडी प्रवेश र पार गरिसकेपछि मोड्नका लागि भुगोल अपुग भएकोले फेरि डिजाईन गर्नु पर्ने सडक डिभिजन प्रमुख बाबुराम सापकोटाले बताउनुभएको छ । ६० मिटरबाट ७२ मिटर लम्बाई हुदाँ १५ रोल्पाको माडिखोला पुल तत्कालीन नेकपा (माओवादी) सत्ताको नेतृत्वमा पुगेपछि पहिलो प्राथमिकताका साथ २०६८ असार मसान्तसम्म निर्माण नभएपछि रोल्पा जिल्लाका नेतृत्व, सरोकारवाला निकायहरु नै आलोचनाका पात्रा बन्न थालेका थिए । पछि बसन्त डिसीले निर्माण नर्गे गरी अगाडि बढेपछि ठेक्का टोडियो अनि नयाँ टेण्डर आह्वान गरी नयाँ सम्झौता अनुसार अगाडि बढेको थियो ।
कुन कम्पनी होे समयभित्र निर्माण गर्ने ?
पहिलो निर्माण व्यवसायी बसन्त डिसीले काम नगरेपछि कार्यालयले ठेक्का टोडेरै छाड्यो । यो पुल बनाउको लागि फेरी ७२ मिटर लम्वाई, ६ मिटर चौडाईको बनाउनको लागि बोलपत्र आह्वान गरेपछि एसिट टिक÷राज जे.भी.लाई परेको थियो । २०७५ असार ३० गते ३ करोड ३५ लाखको बजेटमा सम्झौता भएको थियो । १७ महिना भित्र नै निर्माण गरि सक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । समय भित्र सम्झौता गरेको करिव १ वर्षमै निर्माण भएको छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधी राजबहादुर घर्तीमगरले काम गर्ने इच्छा शक्ति, र आर्थिक लगानी नै प्रमुख भएकोले आफूले समयभित्र निर्माण गर्न सकेको बताउनुभयो । साथै उहाँले भन्नुभयोः–“मलाई रोल्पा जिल्लाका नागरिकहरुको लागि गर्नुपर्दछ, म पनि सदरमुकामभन्दा पश्चिम तालाबाङ निवासी हुँ, मलाई पनि माडिखोला पश्चिमबाट आउँदा कस्तो समस्या हुन्थ्यो त्यही अनुसार जसरी भए पनि निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने उर्जाका साथ लागेका थिए ।” पुलको पुल निर्माणका लागि डिजाईमा २०को रक कटान मात्रै भएपनि आफूले करिव ५० मिटर रक काटान गरेको दावी गर्नुभएको छ । पुलमा यातायातको मोड्नका लागि भूगोल अपुग भएपछि कटान गर्नुभएको छ ।
माडिखोलामा काठेपुलमा वर्षे खर्च ?
यसरी निर्माण नहुँदा वर्षेनी तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट काठेपुल निर्माणमा आर्थिक खर्च भइरहेको थियो । बिकल्पमा निर्माण गर्दा जिल्ला विकास समितिका योजना फाटका अनुसार आ.ब. २०६७÷०६८ मा २ लाख पचास हजार, आ.ब. २०६८÷०६९ मा ३ लाख, आ.ब. २०६९÷०७० मा ५ लाख, आ.ब. २०७०÷०७१ म ५ लाख खर्च भइसकेको छ । यस्तै यस आ.ब. २०७१÷०७२ मा ५ लाख रुपैया विनियोजित भएर पनि खर्च भइसकेको थियो । त्यस अन्त्य बजेट पनि खर्च भइसकेका थियो ।
वर्षाै देखि वर्षा याममा माडीखोला बारी र पारी रहेका यातायातका साधानहरु यस वर्ष भने लिबाङ र पश्चिम क्षेत्रका सडकहरुमा यातायात सञ्चालन भएको छ । माडीखोलामा बेलीव्रिज बनेपछि २०७२ साल भाद्र ९ गतेदेखि जलजला यातायात समिति रोल्पाले नियमित रुपमा सवारी साधानहरु सञ्चालन गरेपछि यात्रुहरुले सहज रुपमा यात्रा गरिरहेका थिए ।
बेलीव्रिज निर्माण गर्नका लागि जानकी एण्ड कन्काई निर्माण सेवाका प्रतिनिधी जनक ख्काले जिम्मेवारी लिनुभएको थियो । पुल निर्माण भएपछि जलजला यातायात समिति रोल्पाले भाद्र ९ गतेदेखि लिबाङ सात्तालेबाट पश्चिमक्षेत्रमा यातायात सञ्चालन भएको थियो । बेलीविज्र नहुँदा रोल्पा जिल्लाका यात्रु निकै सास्ती भोगेका थिए । त्यो भएपछि अस्थायी प्रकारको हल भएको थियो ।
माडीखोलाको पुल निर्माणको लागि सम्झौता भएपछि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदेश त्रिपाठी हुदाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनमगर हुदाँ नै शिलेन्यास गरिएको थियो । कयौ वर्ष आफ्नो घर नजिकैको पुल निर्माण गर्न नसकेको भनेर आलोचना पनि नभएका होइनन् तर निरन्तर रुपमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनमगर लगायले सबै सरोकारवालाको पहलमा निर्माण भएको छ । अब उहाँबाटै उद्घाटन भएपछि अब रोल्पालीहरु मात्रै होइन यस सडममा हिड्ने सम्पूर्ण यात्रुहरुले सहजरुपमा यात्रा गर्न पाउने भएका छन् । रोल्पा जिल्लामा हाल धेरैवटा पुल निर्माण भएका छन् । त्यसले रोल्पालीको जनजीवनलाई सहज बनाएको छ । यो पुल निर्माण भएपछि रोल्पाली नेताहरु पनि सफल भएका छन् भने रोल्पाली नागरिकहरुले पनि सुखदको शास्ती फेर्न पाएका छन् ।